Saameynta ay yeelan laheyd hadii fulkaanaha Antarctica ay qarxaan | Saadaasha Shabakadda
Antarctica waa qaaradda koonfureed ee ugu sarreysa Dunida, oo dusheeda ka dhigaysa buste baraf ah. In kasta oo fulkaanaha qaarkood la yaqaanay sannado, haddana xog cusub oo dayax gacmeed ayaa lagu soo warramey in barafkaas hoostiisa ay jiraan ilaa 100 kale oo aan la aqoon. A waxbarashada lagu daabacay Akadeemiyada Qaranka Mareykanka ee Cilmiga waxay soo warisay xaqiiqo muhiim ah in waxay dhacday 18.000 oo sano ka hor. Saynisyahannada Paleoclimatic waxay baareen qaar dillaaca weyn ee Mount Takahe, oo joojiyay xilligii barafka ee ugu dambeeyay waxaa jiray.
Laga soo bilaabo diiwaanka laga helay barafka, qaraxyada waxaa laga helay inay hodan ku yihiin halogen ayna cuneen ozone ku filan oo hubaal ku abuuri kara god weyn oo ku jira lakabka ozone. Waxay ahayd markaa in deglaciation deg deg ah bilaabay, kaas oo sidoo kale tilmaamay Mount Takahe laftiisa inuu mas'uul ka yahay. The Cawaaqib xumo balaaran ayaa sidoo kale laga helay meel 2.800km u jirta goobta uu qaraxu ka dhacay, iyo saamaynteeda waxay gaareen kuleylka hoose.
Maxaan filan karnaa haddii in ka badan hal fulkaano qarxaan?
Xaaladda aad bay uga sii dari lahayd. In kasta oo aysan u badnayn in wax ka badan hal qarax uu isku mar dhacay, haddana ma ahan dhacdo aan macquul ahayn. Dhinac waxaan leenahay volcanoes-ka dusha sare jooga, sida buurta Takahe, iyo kuwa gudaha ka badan oo lagu yaqaan inay firfircoon yihiin laakiin aan qarxin. Xaaladdan oo kale, oo ay u badan tahay inay mustaqbalka qarxaan, si ay u keento xasillooni darro waxay ku qasbanaan lahaayeen inay ku dhaqmaan tiro badan iyo rabshad dabcan.
Waxa aan heli lahayn ayaa noqon lahaa a dhalaalid dusha sare. Haddii ay qarxaan rabshado, waxaa jiri lahaa halista in fulkaano cusub ay qarxaan. Dhalaalku, horeyba waa loo tixgeliyey, wuu jeclaan lahaa kordhinta heerarka badda. Marinka badda, oo ah wareegga biyaha badda ee u qaybiya heerkulka, waa la beddeli karaa, oo saameyn ku leh qayb ballaaran oo ka mid ah noocyada badda. Maaddaama Antarctica aysan faafineynin kuleylka badan, heerkulku si weyn ayuu ugu kordhi lahaa adduunka oo dhan, gaar ahaan koonfurta-bawdada. Taasi waxay noqon laheyd Saamaynta Domino Waxa laga baqayo inay dhacaan, falcelinta jawaab celinta, sii dhalaalida, waxay u dhowdahay inay fulkaano kale qarxaan. Mid ka mid ah xaaladaha yar ee volcanoes, iyada oo aan la gaarin heerka supervolcanoes, ayaa si lama filaan ah u xasiloonida cimilada adduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Saamaynta ay yeelan lahayd haddii volcanoes of Antarctica ay qarxaan